Ma n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ, achọrọ ụlọ nyocha, yana nsogbu nchekwa dị mkpa na nchegbu ka ukwuu. Ihe mgbochi mberede dị mkpa karịsịa mgbe kemịkal na-agbasasị na ahụ mmadụ ma ọ bụ anya na-akpachaghị anya. Nchọgharị ụlọ nyocha bụkwa ngwa ọrụ nchekwa dị mkpa. Ebe ọ bụ ihe nchekwa nchekwa dị mkpa, a ghakwara ịhazi nhazi nke ime ụlọ nyocha.
A na-ejikarị igwe anaghị agba nchara larịị eji eme ihe eji eme ka anya na-acha uhie uhie, wee lelee laabu bụ chloride na ọgwụ ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Ọ bụrụ na kemịkal kemịkalụ buru ibu, elu nke nku anya ga-etinye ya na ABS ma ọ bụ ọgwụgwọ arụmọrụ dị elu, nke mere na imi anya laabu na-eme ka corrosion na-eguzogide ọgwụ na ndụ ọrụ nke anya na-agbatị. Enwere ike iji ihe nhicha larịị mee ka ihu dị ọcha, iko, olu, ogwe aka, wdg. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịsacha ahụ niile nke anya, ị nwere ike ịhọrọ akwa anya na-ehicha, na-ehicha nke ọma.
Bohua na-asa ngwaọrụ na-emepụta ihe na-agbaso agbacha agbacha agbacha agbacha agbacha agbacha agbacha agbacha nke usoro ịsa ahụ nke America, ọkachamara na mmepụta anya anya ihe maka ihe karịrị afọ iri, yana mmepe, imewe, mmepụta, ahịa dị ka otu n'ime ndị nrụpụta. Na a ọnụ ọgụgụ nke chemical ụlọ mmepụta ihe nwere imekọ ihe ọnụ, site n'onye ahụ nke ngwaahịa mma na mgbe-sales ọrụ, merie ndị ahịa si na-agbanwe agbanwe elu otuto. Chepụta ma mepụta ọtụtụ ngwaọrụ anya, tinye n'ọrụ maka ọtụtụ teknụzụ teknụzụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ngwaahịa anya anya Bohua, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị!